Tirada magangalyo doonka oo waxyar hoos u dhacday | Somaliska
Tiradada magangalyo doonka ayaa hoos u dhac ku yimid sida ay sheegtay Laanta Socdaalka Sweden. Qiimeyntii la sameeyay bilowgii sanadkaan oo ahayd in la filayo 30,000 oo qof in ay iska dhiibaan Sweden ayaa hada hoos loo dhigay oo la filayaa 29,000 in ay timaado.
Balse Laanta Socdaalka ayaa sheegtay in aan la isku halayn karin tiradaas sababta oo ah qalalaasaha ka taagan wadamada bariga dhexe sida Libya iyo Syria oo la filayo dad badan in ay ka soo firxadaan.
Soomaalida ayaa ka mid ah dadka ugu badan ee hoos u dhaca ku yimid ka dib markii sanadkii hore la saaray shuruuda aadka u adag ee ah in ay aqoonsigooda cadeeyaan. Isbedaladii la filayay sanadkaan ayaan waxba ka soo bixin iyadoo hada Soomaalida inta badan ay ka war dhowrayaan gudi la sheegay in loo saaray wax ka badalka arintaan.
ASC jimcaale guddigaan wax manooga sheegi kartaa waxaa ay wax ka badalaayaan ma dowladaa magacowday mise maxkamada. waad mahadsantahay
August 2, 2011 at 15:31
WAR QEYR LEH ALLE HA SOO YEERSHO sUBXAANAHU WATACAALAAA.
Allah ayaa awood leh marwalba Allah ayan isku haleyneynaaaa
as,c jimcaale walal waxaan kaadoonayaa inan kuala soo xariiro si aan ku weydiiyo su,aalo gar ii ah thnz
August 2, 2011 at 16:01
asc wallal jimcale goorme ayey ka fariisanayan waa tii aad afka ku dhufatey nasta vecka mise weli fasax ayey jiran mahadsanid
Asc, gudiga mar hore ayaa loo saaray arintaan. Waqti cayiman lama sheegin oo ay go,aan soo saarayaan balse qiyaastii waxay yiraahdeen ugu yaraan lix bilood oo u baahan in sharciga la badalo oo la dhaqan galiyo heshiiskii dowlada iyo xisbiga deegaanka.
Khaalid telefoonada iyo emailkeena waxa uu ku qoranyahay qeybta Contact us.
August 2, 2011 at 17:25
kkkkkkkkk waxaan u malaynaaa wax aan jirin ayaad niyada noogu dhisaysaaa
Walaal waa Ramadaan , dani iiguma jirto in aan been niyada kugu dhiso. Wsc
asc sxb waxaan rabaa inaad faahfaahin iga siisid qaabka tayooriiga loo baranaayo
August 2, 2011 at 21:06
gaaladaan sidaan wax uga rajeynaynay waan ku daalneen ilaahay is bedel qeer leh ha inoo keeno ramadaanka fadligiisa
Halkaan ayaad ka heleysaa faahfaahinta iyo telefoonadeeda. http://somaliska.com/skolan/
asc walaal ilaah abshirta nawaafajiyo ilaah awood leh lkn aniga ma aminsani waxaan lasheegaayo malin kasto dib udhaceeso magaranaayo qeer alle keeno insha alaah
cidna seysan keenin , somali dalkeeda ha dhisato